अर्काकी स्वास्नी -(कथा) - Subhay Postअर्काकी स्वास्नी -(कथा) - Subhay Post
अर्काकी स्वास्नी -(कथा)
सुभाय् संवाददाताJuly 6, 2020 मा प्रकाशित (१ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
फेसबुक खोले पनि मेरो हत्तपत्त इन्बक्समा आँखा जादैन । अक्सर फेसबुकको टाइमलाइनमा के समाचार आयो नयाँ भनेर नै फेसबुक खोल्छु म । धेरै टाइमलाइनमै ब्यस्त हुन्छु । कि धेरै म्यासेज गर्ने, कि त केही फरक स्टाइलमा म्यासेज आयो भने किन रहेछ भनेर आक्कल झुक्कल इन्बक्समा आँखा लगाउँछु ।
साँझपख फेसबुक खोलेँ । खोल्नासाथ म्यासेज आयो– ‘हेल्लो म्याम !’
मैले जवाफ फर्काइनँ । उताबाट लगातार आइरह्यो– ‘किन नबोल्नु भएको ?, हेल्लो !, बोल्नु न प्लिज, एकपटक बोल्नु न प्लिज, एक पटक बोल्न मन लागेको छ बोल्छु नि, हजुर यति निस्ठुरी हुनुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको पनि थिइनँ ।
‘निष्ठुरी’ भन्दा मलाई झनक्क रीस उठ्यो । किनकि मलाई थाहा छ म कोमल छु ।
मेरो एकाग्रता भङ्ग भयो ।
एकछिन अडिएँ र जवाफ फर्काएँ– ‘यु नो मि ?’
फेरि लेखँे– ‘मेआइ नो यु ?’
उसले पठायो – ‘म चिन्छु । राम्ररी चिन्छु हजुरलाई ।’
फेरि अर्काे प्रश्न गरेँ– ‘कहाँ हो तिम्रो घर ?’
‘म चिन्छु हजुरलाई र भएन ?’
‘तिमीले मात्र चिनेर हुन्छ ? भन न, म पनि चिनौं ।’
मैले उसको टाइमलाइन खोलेर हेरेँ ।
अमित अमित । घर झापा । बसाई सरेर काठमाडांै । एक बहिनी आमा, बुबा । उमेर त मेरो भन्दा १२ बर्ष कम । चाटर्र एकाउन्टेन । इन्डीयामा पढेको । त्यहीँको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम गरेको । ट्यालेन्ट रहेछ केटो । त्यति हेरेर म इन्बसमा फर्किएँ ।
यतिबेलासम्म उसका म्यासेज कति हो कति– ‘म्याम बोल्छु नि प्लिज । एकछिन् बोलीस्यो न । म त्यति नराम्रो मान्छे हँु र, हजुरले बोल्नै नहुने ? मैले त्यस्तो नराम्रो के भनेँ र अहिलेसम्म ? बोलीस्यो न प्लिज । कति पटक बोल्न खोजेँ तर, हजुरलाई कहिल्यै अनलाईन पाउँदिनँ ।’
उसले के पठाएछ भनेर हेर्न मन लाग्यो, पुरानो म्यासेज खोलेर हेरेँ । सुरुमा हेल्लो, हाई, फेरि हेल्लो ब्यूटीफुल म्याम । यस्तै यस्तै धेरै धेरै । उसले झण्डै डेढ बर्ष देखि मलाई हेल्लो हाई भनेर म्यासेज पठाएको रहेछ , सयवटा जति ।
यो हेरेपछि किन त्यसै त्यसै माया लागेर आयो । ‘ल भन’ –मैले भनेँ ।
उसको कुराले म केही खुसी पनि थिएँ र दुःखी पनि । संसारमा लोग्नेमान्छे र स्वास्नीमान्छे हुन्छन् तर, बिहेपछि मान्छे भित्रको स्वतन्त्र भाव हराउँदै जाँदा मान्छे हराउँछ र लोग्ने–स्वास्नी मात्रै बाँकी हुन्छन् । आखिर म पनि त स्वास्नी हुँ, अर्कैकी स्वास्नी, किन बुझ्दैन उ ?
‘कति राम्री हो म्याम, हजुर त । जुन फोटो हेरे पनि उस्तै । कति खुसी हजुरको अनुहारमा, कति मीठो हाँसो, कहिल्यै पीडा देखिन्न । थाहा छ म्याम, मैले हजुरको सबै फोटोहरु राखेको छु नि । गाली नगर्नु ल । मलाई हजुर अति नै मन पर्छ । मेरा साथीहरुमा हजुरजति राम्रा कोही छैनन् । कस्सम मलाई हजुर अति मनपर्छ ।’ बाटुला दाना भएका अनाज अंजुलीमा उठाएर मतिर फ्यांकेझैं बरबर्ती म्यासेज आयो ।
‘हो, ल धन्यबाद । अनि तिमी यहाँ के गर्छाै नि ?’ मैले सोधेँ ।
नेपालको एक प्रतिष्ठित कम्पनीको नाम लिंदै उसले भन्यो– ‘अहिले म त्यहाँ फ्रन्ट डेस्क हेर्छु । हिजोबाट मात्रै सुरु गरेको । मैले सीभी पठाएको, हेर्नासाथ बोलायो । हिजोदेखि काम सुरु गरेँ ।’
ए ए राम्रो भएछ । ल बधाई ।
उसले पठायो– ‘थ्याङक्यु म्याम ।’
एकछिन रोकियो म्यासेज आउन । फेरि लेख्यो–‘यु नो म्याम, म कति खुसी भएको त्योबेला । कस्सम मैले एग्रीमेन्ट पेपर लिंदै गर्दा हजुरलाई सम्झेको नि । यो खुसी तपाईंलाई सुनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर । आज हजुर बोल्नुभो कस्तो खुसी लागेको छ । साँच्चै जागिर पाउँदा भन्दा धेरै ।
कस्तो एकोहोरो पागलपन उसको । यसलाई देखेर एकमन रीस उठेको थियो तर, मैले उसलाई त्यो देखाइनँ । उसले आखिर मेरो बिगारेको पनि त केही थिएन । मैले हाँसेको देखाउँदै म्यासेज लेखेँ– ‘हाहाहा…।’
हाँसेकोमा चित्त दुखाएजस्तो गरी उसले फेरि लेख्यो– ‘किन हाँस्नु भएको ? मैले साँचो कुरा गरेको ।’
‘खुसीमा किन आमा बुबा नसम्झेको ? नजिकका साथी होलन्, गर्लफ्रेन्ड होलिन् उनीहरुलाई किन नसम्झेको ? नचिनेको मान्छेलाई सम्झेको भन्दा हाँसो उठ्दैन त ?’ मैले लेखेँ । उसले स्याड मुडको स्टिकर पठायो । मैले स्माइल मुडको जवाफी स्टिकर पठाइदिएँ ।
‘म्याम, म पनि एउटा ब्यस्त केटा हुँ । मैले आफूलाई शारिरिक, बौद्विक, आर्थिक सबै ठाउँमा फिट राखेर हिंड्न सक्ने मान्छे बनाएको छु । च्याटमा नचाहिँदा कुरा गरेर बस्ने समय एकरत्ती छैन । जे मनले भन्यो त्यहि मैले हजुरलाई भनेको हुँ । पत्याउनु नपत्याउनु हजुरको जिम्मा । हजुरले नपत्याएर मलाई केही नराम्रो पनि त हुन्न ।’ उ यस्तै यस्तै निरन्तर लेखि नै रहेको छ ।
उ आफ्नो विवरण सुनाउन थाल्यो– ‘म्याम मैले पढ्नेदेखि जागिरसम्म इण्डीयामै गरेँ । अरु साथी त के, आमा बुबा पनि नजिक हुनुहुन्न । पढाई र कामले गर्दा केटी साथी बनाउन समय नै भएन । फेसबूकमा पनि तीनसय जति मात्र साथी छन्, सबै चिने जानेका मात्र ।’
‘ए हो ?, देश बिदेश घुमेको मान्छे किन धेरै साथी नबनाएको त ?’ मैले प्रश्न गरिदिएँ ।
मौका छोपेझैं गरेर उसले लेख्यो– ‘खै, तापाईजस्तो भेटीन कि ।’
जवाफमा मैले फेरि लेखेँ– ‘हाहाहा…..।’ उसले फेरि स्याड फेस पठायो ।
केही नबोली म त्यसै म्यासेन्जरबाट बाहिरिएँ ।
तीनदिन म आफ्नै, कामले नेटभन्दा धेरै बाहिर रहँे । तीन दिनपछि घर पुगेर साँझमा फेसबुक खोलेँ । अरु पनि म्यासेज त थियो । तर, मालाई उसकै म्यासेजले तान्यो । किनकि उसैका म्यासेज धेरै थिए । यति धेरै म्यासेज त मैले बर्ष दिनमा पनि कसैलाई पठाइनँ होला । पहिलो दिन पठाइएको म्यासेजमा एउटा सिङ्गो निबन्धमा मेरो राम्रोपनको ब्याख्या गरिएको थियो । त्यसमा मेरो सुन्दरता र मेरा क्रियाकलाप थिए । लेखाई पनि मिठासपूर्ण, आफ्नाबारे लेखेको पढेर आफैंलाई लाग्यो– म जस्ती राम्री संसारमा कोही छैन र यो म जति खुसी कोही पनि छैन । अनि भगवान पनि म सँगजति नजिक अरु कोहीसँग छैनन् । म्यासेज पढ्दा म आफैं पग्लिएँ । मन एक प्रकारले मुस्कुरायो । ओ हो, एउटा मान्छेले अर्काकोबारे यति धेरै प्रशंसा कसरी गर्न सक्छ ?
दोस्रो दिन । ‘किन नबोल्नुभएको ? मैले केही गलत गरेको भए सरी प्लिज । हरेक पटक सरी सरी भनेर माफी मागेको । अब त्यस्तो भन्दिनँ प्लिज, बोल्नुन म्याम । किन नबोल्नु भएको यत्रो दिन म्याम मसँग ? कति पटक फेसबुक खोलेँ तर, तपाँइलाई कहिल्यै भेटिनँ, कहाँ जानुभएको थ्यो ?’ यस्तै अनुनय र अपिल गरिएका म्यासेज आइरहेका थिए । म पनि उसँग म्यासेज गर्ने लती भइसकेकी थिएँ ।
‘हैन हैन म नेटवर्कनै नहुने ठाउँमा गएकी थिएँ । के छ तिम्रो खबर ? सञ्चै छौ ?’ मैले सबै प्रश्नको एकैचोटी उत्तर फर्काएँ ।
उ अनलाईन नै रहेछ, हत्पति उसले लेखिहाल्यो– ‘झण्डै बिमारी भएको नि हजुरले तीन दिनसम्म म्यासेज नहेर्दा ।’ म तीन दिन अनलाईनमा नहुँदा बिरामी नै पर्ने कस्तो असामान्य कुरा गरिरहेको थियो उ । एक हिसावले म भावसुन्य भएँ । र उसको गम्भीरुतालाई समान्य रुप दिन मैले जवाफ फर्काएँ– ‘हाहाहा….।’
उ झन् गहिरिएर भावुक हुन थाल्यो । ‘हाँसो उठ्यो म्याम ? हाँस््नुस् । हजुरलाई हाँसेको सुहाउँछ पनि । तर मेरो पीडा कहिल्यै बुझ्नु भएन हजुरले’ उ गहिरिएर भावुक भएको म्यासेजले बुझिन्थ्यो ।
मैले उसको भावुकता मेट्न अफिसतिरको हालखबर सोधेँ– ‘भन, कस्तो भयो त तिम्रो बाँकी दिन अफिसका ? रमाइलो छ अफिस ?’
‘रमाइलै छ । बोसले मलाई नै काम जिम्मा दिन्छ, विश्वास पनि गर्छ । तर, अफिसमा राम्रो भए पनि हजुर नबोल्दा मन अति दुखेको थियो ।’
‘हाहाहा… हो र ?’ मैले स्माइलको लोगो पनि सँगै पठाएँ । उ केहीक्षण बोलेन । म पनि मोबाइल चार्जमा राखेर खाना बनाउन लागेँ ।
भोलिपल्टसम्म लाइन आएन । कति दिन त मैले फेसबुक नै खोलिनछु । फेसबुक नै खोले पनि कति दिन इनबक्स सम्म पुग्न भ्याइनँ । बीचमा हाम्रो कुरा भएन । हेलो म्याम, कस्तो छ हजुररलाई भन्ने किसिमका अफलाइन म्यासेज भने कुनै दिन छुटेनन् । मैले पनि भ्याएसम्म रिप्लाई गरँे । उसका म्यासेजमा धेरै पटक मिस यु म्याम भनिएका हुन्थे । जवाफ नपठाए पनि मनमनै थ्याङक यु भन्न मैले छुटाइनँ ।
महिनौ बितेको थियो उसले मलाइ यसरी निरन्तर म्यासेज पठाउन थालेको । एकदिन काम गरीरहेकी थिएँ अफिसमा । उसैको म्यासेज आयो– ‘म्याम हजुरलाई भेट्न मन लागेको छ । कहिले फुर्सद हुन्छ हजुरको ? एक घण्टा मात्र प्लिज ।’
म्यासेज त हेरेँ तर रिप्लाई गरिनँ । उसको शैलीमा यति बिनम्रता थियो, मानौ उ कुनै मगन्ते हो र म दानी । आफूलाई म आफैं देखि रीस पनि उठ्यो कति क्रूर भएकी म । उ यति झुकेर म नजिक आउन खोज्दा म कि सती क्रूर भएकी हुँला ? साँचोमा म यस्ती क्रूर मान्छे त होइनँ । मन मानेन फेरि म्यासेज बक्स खालेँ र लेखेँ– ‘ल भन न त, कहिले भेट्ने ?’
मेरो म्यासेज पुग्न नपाउदै उसले पठायो–‘थसडे भेट्ने हुन्छ ?’ मैले नि ल हुन्छ भन्दिएँ ।
चार दिनपछि भेट्ने कुरालाई उसले हरेक दिन सम्झाइरह्यो । तर त्यो दिन सञ्चारिका समुहको प्रोग्राम परेको रहेछ । मलाई त बिहान अफिस जान लाग्दा पो याद आयो । अफिसमा आज बाहिर प्रोग्राम छ आउन भ्याउदिन है भनि फोन गरेँ । त्यो फोन राख्ने बित्तिक्कै अमितको फोन आयो– ‘म्याम कहाँ भेट्न पाउँछु मैले ?’ मैले भनेँ– ‘आज एउटा प्रोग्राममा जानु छ । कहाँ कति बेला भेट्ने त्यो म भन्छु नि भरे ।’
‘भरे भन्या कति खेर ?, हजुरको प्रोग्राम कहाँ हो ?’ उसले लगातार प्रश्न सोध्यो ।
‘पुलचोकमा हो, म पछि कल गरौंला नि तिमीलाई । फेरि के छ र त्यस्तो भेट्नै पर्ने ?’ मैले भनेँ । उ बोल्न छोड्यो । मलाई लाग्यो उ अफ भयो फेसबूकबाट । म पनि कार्यक्रममा जाने तयारी गर्न थालेँ । कार्यक्रममा ब्यस्त भएछु । मोबाइल ब्यागमा थियो । साँझ घर फर्कने बेलामा हेर्दा पो अमित ले २१ पटक फोन गरेछ । जिउ थाकेकोले बेलुका खानासम्म नखाइ सुतेँ ।
भोलिपल्ट अफिस पुगेर फेसबुक खोलेँ, अमितले चित्त दुखाएर धेरै म्यासेज पठाएछ । ‘हेर न, मैले त भुसुक्कै भुलेछु । सरी है, नरिसाउ’ मैले अफलाइन म्यासेज पठाएँ ।
अफिसको कामले म बिराटनगर गएँ, सात दिनको लागि । थारु गाउमा स्थलगत अध्ययनको सिसर्च गर्नु थियो । एयर्रपोर्टबाट एउटा फोटो फेसबुकमा अपलोड गरेँ र लेखँे– ‘बाई बाई काठमाडौ फर सम डे ।’ उसकै पहिलो कमेन्ट आयो– ‘म्याम मलाई छोडेर नजानु प्लिज, म एक्लै हुन्छु यहाँ ।’ ओहो, यो के लेख्यो उसले, के के न भएजस्तै गरी । मैले उसको कमेन्ट आउनासाथ डिलिट गरिदिएँ । सोचेँ– कस्तो बदमास रहेछ जिस्कने पनि फेसबुकमा ? खुब रीस उठेर आयो । उसले म्यासेज गर्यो–‘सरी म्याम ।’ मैले म्यासेज खोलेर नहेरीकनै अफ गरेँ र प्लेन चढेँ । खै के भयो कुन्नी उता गएपछि मेरो मोबाइलमा डाटा चल्न छोड्यो । अफिसको काममा गएकोले निक्कै ब्यस्त पनि भएँ । सात दिनपछि अफिस गएँ । मेरो टेवलको टेलिफोन बज्यो । उठाएँ, तर कोही पनि बोलेन । धेरै पटक यस्तै भयो । एक पटक उठाएर बेस्मारी गाली गरँे– काम छैन कि क्याहो ? यस्तो डिस्टर्ब गर्ने हरामी भनेर । फोन पास गर्ने दिदीलाई पनि गाली गरेँ, एउटै मान्छ को फोन कति पठाएको ? अब नाम सोधेर मात्र फोन पास गर्नु । कराउँदै फोन राखिदिएँ । त्यसपछि फोन आएन ।
धेरै समयसम्म उसको फोन आएन । एक दिन, अफिसमा मेरो टेबुलको फोन बज्यो, फोन उठाएँ । ‘म्याम नमस्कार’ स्वरबाट मैले चिनिहालेँ । नम्र बोल्ने उही अमित थियो । ‘कस्तो छ म्याम हजुरलाई ?, सरी म्याम, प्लिज मलाई जति गाली गरे पनि गर्नु तर, एक पटक भेट्छु नि प्लिज । म हजुरकै अगाडी भन्छु सबै कुरा । भोलि भेटौं न ।’ प्रश्न र अनुनय सबै एकै पटक गर्यो उसले । मलाइ खुब गाली गर्न मन थियो तर, उसको बिनम्रताले म ओइलाईसकेकी थिएँ । भनिदिएँ– ‘हस ।’ उसले भेट्ने ठाउँ र समय सबै ठेगान गर्न लगायो । तीनकुनेको कफिसमै आउन भनेँ मैले लोकेशन दिएर बिहान दश बजेका लागि । उसले फोन राख्यो । भोलिपल्ट म तीनकुने पुगेँ अफिस जानु अगाडि । उ अगिनै आएको रहेछ । त्यहीं, कफीशपमा गएर बस्यौं ।
यो हाम्रो पहिलो भेट थियो । उ टेबलको अगाडि, म अर्कोपट्टी, आमनेसमनो बस्यौं । उसको शीर निहुरिएको थियो । सायद मेरो फोटोमा कमेन्ट गरेको मैले डिलिट गरेको कुराले मसँग बोल्न डराइरहेको थियो । ‘कुन कफी पिउनुहुन्छ म्याम ?’ टेबलको मेनु हेर्दै उसले सोध्यो । मैले भने– ‘मिल्क ।’ उसले वेटरलाई अह्रायो ।
उसले मतिर पुलुक्क हे¥यो । अनुहार रातो थियो र आँखा रसिला । कलिलो ओठ तर, कति दिनदेखिको बिरामी जस्तै कलेटी परेका । दबिएको स्वरमा भन्यो– ‘सरी म्याम ।’
‘के को सरी ?’ मैले थाहा नपाएझैं गरेँ ।
‘मैले गल्ती गरेँ, हजुरको फोटोमा कमेन्ट गरेर’ उसको निधारमा चिट्चिट पसिना आएको थियो ।
किन किन मलाई त्योबेला कमेन्ट गर्दाको समयमा जस्तो रीस उठेन । हाँस्दै भन्दिएँ, ‘इट्स ओके ।’ त्यतिबेलै भएको भए सायद म गालामा झापड हान्थँे । उसको शब्दमा भन्दा अनुहारमा क्षमाका गुण सवार थिए । उ हरेक तरिकाले गल्ती गरेँ भनेर मलाई बुझाउन चाहान्थ्यो । त्यसबेला मलाई साँच्चै उसको यति धेरै माया लागेर आयो कि काखमा राखेर चुमिदिउँ जस्तै । भावावेशलाई मैले नियन्त्रण गरेँ, माया लागे पनि मैले देखाइनँ । हाम्रो झण्डै पन्ध्र मिनेटको बसाइमा उसले सरी भन्ने बाहेक मसँग एक पटक मात्र पनि आँखा जुदाएर कुरा गर्न सकेन । उ निहुरिएको थियो, जुत्ताको खुस्किएको तुना लगाउदाजस्तै । कफीको पैसा तिरर म तल झरेँ ।
कफी पिउँदा उसले भनेको थियो– ‘मैले इतियाड एयरलाइन्समा फर्म हालेको एसेप्ट गर्यो नि । म २६ तारिख जाँदैछु ।’
‘ए, हो ल फेरि बधाई ।’
उसले त्यसै बेला एक पटक हो मसँग आँखा जुधाएको । म पनि खुसी देखिएकी थिएँ कि । बिदा भएर हिंड्दा पनि उ त्यहीँ उभिएको थियो । पर पुगेर गाडी चढ्न लाग्दा फर्केर उसैतिर आँखा लगाएँ, उ त्यहीँ उभिएर मलाई हेरिरहेका थियो ।
अफिस पुग्दानपुग्दै मोबाइलमा म्यासेजटोन बज्यो । हेरेँ, उसकै म्यासेज, ‘म केही भन्छु भनेर आएको थिएँ, तर, केही बोल्नै सकिन । मेरा त आँशु आए त्यसैले म निहुरेर मात्रै बसेँ । हजुरलाई एउटा कुरा दिन्छु भनेर ल्याएको थिएँ दिन पनि सकिनँ ।’ म्यासेजसँगै उसले गोल्ड रिङको फोटो खिचेर पठाएको थियो । मैले सपराइजको स्टिकर पठाएँ । एक छिन म्यासेज आउन रोकियो । केहीबेर पनि फेरि म्यासजे– ‘म्याम एउटा कुरा भन्छु, मलाई गाली नगर्नुहोला । कति राखौं यो मनमा । मलाई पीडा मात्रै हुन्छ मनमा कुरा राख्दा ।’
‘ल भन ।’
‘म्याम म तपाइलाई अतिनै मन पराउँछु, म तपाईलाई चाहन्छु म्याम । हजुरलाई बर्थडे गिफ्ट पठाएको मैले हो म्याम । म त्यतिबेलै हजुरलाई यो सबै कुरा गर्न चाहान्थेँ तर कहिल्यै भन्न सकिनँ । अफिसमा बारबार म फोन गर्थेँ, हजुरको आवाज सुन्न । हजुरले कहिल्यै मेरो कुरा बुझिदिनु भएन । आइलभ यु म्याम । आइ लभ यु, मोर देन एनी वान’ यो म्यासेजमा सबै खुलस्त भयो उ ।
मसँग उसलाई फर्काउने जवाफ फर्काएँ– ‘के पागल भा’को, आइएम म्यारिड । तिमीलाई थाहा छ ? मेरो एउटा बच्चा छ पाँच बर्षको ।’
‘के भयो त म्याम बिहे भएर ? बच्चा हामीसँगै राख्ने नि हुन्न ? हस भन्नु न म्याम । मैले त हाम्रो एउटा सुन्दर संसार बनाएको छु, प्लिज यसलाई नढालीदिनुस् । मलाई उसले तीन महिनामा परिवारकै लागि भिसा दिन्छु भनेको छ । म तीन महिनापछि लिन आउँछु । अनि हामी तिनैजना उतै बस्ने नि है । हामीजति खुसी कोही हुन्न यो दुनियाँमा । हस् भन्नु न म्याम, प्लिज ।’
उसको कुराले म केही खुसी पनि थिएँ र दुःखी पनि । संसारमा लोग्नेमान्छे र स्वास्नीमान्छे हुन्छन् तर, बिहेपछि मान्छे भित्रको स्वतन्त्र भाव हराउँदै जाँदा मान्छे हराउँछ र लोग्ने स्वास्नी मात्रै बाँकी हुन्छन् । आखिर म पनि त स्वास्नी हुँ, अर्कैकी स्वास्नी, किन बुझ्दैन उ ? उ बिदेश गएपछि मैले उसलाई फेसबुकमा पनि ब्लक गरेँ । फेसबुकमा पो ब्लक छ, मेरो मनमा त उ आइरहन्छ हरपल ।